अप्रिलको पहिलो साता डलर भाउमा निकै उतारचढाव, आज झन्डै १ रुपैयाँले घट्यो
काठमाण्डौ । अमेरिकी डलरको विनियम दर अप्रिलको पहिलो साता निकै उतारचढाव देखिएको छ। नेपाल राष्ट्रबैंकले विदेशी मुद्राहरुका लागि बुधबार कायम गरेको विनिमय दरअनुसार डलरको भाउ हिजोको तुलनामा ९३ पैसाले घटेको छ। यो गिरावटसँगै बुधबार प्रतिडलर खरिददर १२०.७१ रुपैयाँ र बिक्रीदर १२१.३१ रुपैयाँ कायम भएको छ। हिजो मंगलबार डलरको भाउ स्थिर रहँदै...
डलरको भाउ गिरवाटमा ब्रेक, आज एकैदिन रु. १.१२ बढ्यो
काठमाण्डौ । अमेरिकी डलरको विनिमय दरमा लगातारको गिरावटमा ब्रेक लाग्दै आज मंगलबार एकैदिन १.१२ रुपैयाँले वृद्धि भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राहरुका लागि मंगलबार कायम गरेको विनिमय दरअनुसार डलरको भाउ हिजोको तुलनामा १.१२ रुपैयाँले बढेको हो। यो बढोत्तरीसँगै मंगलबार प्रतिडलर खरिददर १२०.६८ रुपैयाँ र बिक्रीदर १२१.२८ रुपैयाँ...
डलरको भाउ घटेको-घट्यै, आजको विनिमय दर कति?
काठमाण्डौ । अमेरिकी डलरको विनिमय दर लगातार घट्ने क्रमले आज शनिबार पनि निरन्तरता पाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राहरुका लागि शनिबार कायम गरेको विनिमय दरअनुसार डलरको भाउमा हिजोको तुलनामा आज ४७ पैसाले गिरावट आएको छ। यो गिरावटसँगै शनिबार प्रतिडलर खरिददर ११९.४८ रुपैयाँ र बिक्रीदर १२०.०८ रुपैयाँ कायम भएको छ। हिजो शुक्रबार...